ISEBOX: Mbipụta na Nkesa Ọdịnaya vidiyo | Martech Zone
ISEBOX na-enye ohere ụlọ ọrụ na ụdị iji mange, bipụta ma kesaa onyonyo, akwụkwọ, faịlụ ọdịyo, koodu agbakwunyere, na ndị ọzọ niile na a otu peeji. Ebe ị na-aga nwere ike ịbụ paswọọdụ ma ọ bụ mepere ọha na eze. Faịlụ vidiyo ebudatara nwere ike buru ibu dị ka 5GB kwa faịlụ yana onye ahịa ma ọ bụ HQ na-echekwa mgbasa ozi na desktọọpụ ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka na-enweghị mkpa nbudata, ọkpụkpọ, nbanye FTP, wdg.
Ndị ahịa nke ISEBOX na-eji ikpo okwu otu peeji maka ikesa vidiyo na-ekesa, mgbasa ozi ọha na eze, ngwa ọrụ akụrụngwa, nchịkọta akụkọ mgbasa ozi yana dịka akụrụngwa nkekọrịta akụ ma ọ bụ ọba akwụkwọ ọdịnaya.
ISEBOX Key Key maka Ọdịnaya na mbipụta Gụnyere:
Ọdịnaya niile, Otu Ebe - Bulite onyonyo, vidiyo, odiyo na akwụkwọ nke ụdị ọ bụla na ISEBOX ma kesara ha na ndị otu gị, ndị ahịa gị, ndị nta akụkọ na mgbasa ozi. Enwere ike ilele ihe niile ma budata ya n'otu oghere. Otu URL na-anapụta ihe niile n'otu ebe.
HD Nkesa vidiyo na nkesa vidiyo - Kesaa faịlị vidiyo ruo ogo HD - nchịkọta agbacha ma ọ bụ ọdịnaya b-roll. Gị zuru video faịlụ ga-budata, nakwa dị ka akpaghị aka kere ala mkpebi MP4 na Flv formats. Ọ dịghị ihe ọzọ n'ịtụgharị na faịlụ playback okwu.
Nnukwu faịlụ bulite - Iji ISEBOX si wuru aha ya buru ibu faịlụ buru ibu, bulite ma kesaa otu faịlụ ruo 5GB n’ibu n’etinyeghị ya na FTP na echiche mgbagwoju anya I nweghi ike ime nke ahụ site na email, WeTransfer ma ọ bụ YouSendIt. Ma ị nwere ike bulite ọtụtụ faịlụ ịchọrọ.
Budata na Embed Ndepụta - ISEBOX na-echekwa onye na-ebudata ọdịnaya gị - na-enye aha ha, email, onye were ha n'ọrụ, aha ha na ndị ọzọ - ha niile na akụkọ dị mma na dashboard gị. ISEBOX ga-agwakwa gị ụdị vidio URL etinyegoro ya, yana otu ha si eme.
Akụkọ na nchịkọta - Jiri usoro ISEBOX na nyocha tụlee ịdị irè. Mara ole nbudata na onye onye, ​​peeji nke peeji, na-ekwu banyere okporo ụzọ, ọdịnaya kachasị ewu ewu, na mmetụta mgbasa ozi mmekọrịta (mbak, Mmasị, Tweets, wdg). Nke anyi nchịkọta engine ga - enye gị ozi karịa Google - ị nwere data ahụ, ọ bụghị ha. Y’oburu n’icho itinye ihe Google Analytics ID gi gi okpukpu abua, inwere ike ime ya.
Dashboard na-arụkọ ọrụ ọnụ na-enye gị na ndị otu gị aka ịrụkọ ọrụ ọnụ, yana ọkwa ikike dị iche iche, na ọdịnaya na akụkọ. Ọ bụrụ n’iso ndị ahịa na-arụkọ ọrụ, ị nwere ike inye ha dashboard nke ha, na-enye gị ohere ka ị rụọ ọrụ gafee ha niile.
mobile - A haziri ihe niile na HTML5 iji hụ na ndakọrịta na ngwaọrụ mkpanaka niile - Android, iPhone, iPad, Blackberry, na ndị ọzọ. All videos, oyiyi, audio, na akwụkwọ na-viewable n'agbanyeghị ihe ị bulite, na ihe ngwaọrụ ma ọ bụ ihe nchọgharị a na-eji.
Ofụri Esịt Brand Customizable - ISEBOX ọdịnaya ibe nwere ike ịdebanye aha gị, ma ọ bụ akara ndị ahịa gị ma ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ. Ihe niile site na ọtụtụ nhọrọ font, logo, RGB / Hex colors, background image and more.
E-Mail Nkesa - Bulite gị nkesa anatara na ISEBOX, na mgbe ịtọọ oge ma ọ bụ zipu ISEBOX Mbupụ. Nke a bụ email enyi na enyi nke otu ISEBOX ọdịnaya peeji nke na-ejedebe na folda spam, tinye akara dị ka ozi junk, ma ọ bụ jiri igbe mechie igbe ndị nwere mgbakwunye dị arọ. Ọ ga-akpọ vidiyo ziri ezi na email mgbe akwado ya.
Echebere Paswọdu - Adịghị njikere maka ụwa ịhụ ọdịnaya? Iji otu-pịa paswọọdụ chebe ọ bụla ISEBOX peeji na ọdịnaya. Zuru oke maka mgbasa ozi / odeakụkọ nanị, nkwukọrịta dị n'ime, ma ọ bụ usoro nnabata ndị ahịa.
Asụsụ otutu - Bipụta ibe ọdịnaya ISEBOX gị n’ime otu n’ime ọtụtụ asụsụ gụnyere: Bekee, French, Spanish, German, Italian, Chinese, Portuguese, na Czech yana asụsụ ndị ọzọ agbakwunyere n’ọnwa ndị dị n’ihu.
Social Media dakọtara - frontend e mere na-arụ ọrụ na-ele anya dị ka ezigbo dị ka mmadụ nyiwe anyị na-eji kwa ụbọchị. ISEBOX na-enye gị nhọrọ nke na-eme ka ị pịa otu nbanye nbanye maka ndị ọrụ ibudata ọdịnaya. A na-efesakwa njikọ njikọkọrịta mmekọrịta ọha na eze na ISEBOX, kwa.
Tags: emailomume ebipụtaiseboxMobile na Mbadamba ụrọSocial Media Marketing